Emihle nemibi ngokunemba Seamless amashubhu - Kuanyu Engagqwali Co., Ltd.
Home » Emihle nemibi ngokunemba Seamless amashubhu
Emihle nemibi ngokunemba Seamless amashubhu
Ngenxa ukufunwa ukukhiqizwa kanye nokunciphisa izindleko zokukhiqiza kanye nokukhiqiza, amakhasimende amaningi aye ashintsha kusuka yasekuqaleni abandayo udonseleka Seamless steel pipe ukuthenga ukunemba Seamless steel pipe. Ake sibheke emihle nemibi of ngokunemba Seamless amashubhu steel:
Izinzuzo: 1. Precision Seamless ipayipi ukwakha isivinini kuyashesha futhi ukukhiqizwa okukhipha kuphezulu. Ngaphandle kokulimaza enamathela, ezihlukahlukene amaphethini cross-section zingenziwa ukuze ivumelane nezidingo izimo. 2. Umkhuhlane kweqa inqubo zingenza ipayipi ngokunemba steel ukukhiqiza omkhulu eqine ukusonteka, ethuthukisa iphuzu isivuno ngokunemba steel pipe. 3, ngokunemba of ngokunemba steel pipe kuphezulu, ukuze umsebenzisi kunciphisa isizukulwane imfucuza.
Okumbi: 1. ukucindezeleka asalayo likhona esigabeni of ngokunemba Seamless ipayipi, othinta jikelele kanye lendawo buckling izici ngokunemba Seamless steel pipe; 2. I khulula rigidity torsional esigabeni of ngokunemba steel pipe iphansana; 3. Ngokunemba abandayo iphuma Seamless steel pipe Ukubunjwa odongeni ukujiya incane, kanye nekhono siwuphathe ibanga elingakanani umthwalo wasekhaya kanzulu alwanele.